Ukuzola, indawo yokuphumla epholileyo kuMbindi Tn.
Ukuqhuba elifutshane ukusuka I-40, kwindawo enemithi entle, ebumelwaneni phakathi Tn iinduli, 9 iikhosi yegalufa inkulu kuquka Bear Trace, ikhosi Jack Nicklaus ngaphakathi 20 miles. Okona kunqweneleka kakhulu-isiqingatha seyure sokuqhuba kukukhokelela kwiindlela ezingama-23 zokuhamba intaba kunye ne-kayaking kuMlambo i-Obed, i-Clear Creek, kunye ne-Daddy's Creek. Indlu ecocekileyo ecocekileyo, epholileyo ene-wifi hi def, i-smart TV. Uhambo olufutshane oluya kumama kunye neevenkile zokutyela, ukutya okukhawulezayo, kunye nobomi basebusuku kunye nebhiya yobugcisa, ukungcamla iwayini, umculo ophilayo, kunye nolunye ulonwabo.
Ngexesha lokuwa kwe2021 sisebenza ekugqibezeleni ichibi kwipropathi ukuze iindwendwe zethu zizonwabele. Isiza asikho kufutshane nendlu ngoko akukho ndwendwe luya kuphazamiseka.
Sibekwe kwindawo ekhuselekileyo nenoxolo esembindini weCrossville, elikhaya leCumberland County Playhouse eyaziwayo kunye neCumberland Mountain State Park. I-Cottage ibekwe ngaphantsi kweekhilomitha ezili-10 ukusuka kumbindi wesixeko, i-hangout yendawo ye-Social Brew, i-Fairfield Glade Resort kunye ne-2 wineries-Stonehaus kunye ne-Chestnut Hill. Sinomzila wokungcola ojikelezayo, ukutsala umcu ngexesha lasehlotyeni. Ukhenketho luyafumaneka kwimbali yaseHomestead Tower. Kukho ukufikelela eluntwini kwi-Meadow Park Lake yokuloba, ukuqubha, kunye nokuhamba ngephenyane. Kukho inani leendlela zamanzi ezintle kwabo bafuna ukuhamba ngekayak. Ukuba igalufa yinto oyithandayo kukho iikhosi zobuntshatsheli ezisi-9 kumgama oziikhilomitha ezingama-20. Kubakhenkethi kukho malunga neshumi elinesibini leendlela zokuhamba zikawonke-wonke ezineengxangxasi ezintle ngaphakathi kwendlela emfutshane yaseCrossville. NgeNtwasahlobo kukho iinduli eziluhlaza ezinemibala ebomvu kunye ne-dogwoods eqhakaza, kwaye umbono umhle ngakumbi ngotshintsho lombala ekwindla.